ဂဏာန်း မဆလာဟင်း – Thet Nandar
ဒယ်ဒီချက်သော ဂဏာန်း မဆလာဟင်းပါ …
ဂဏာန်း အသားတော်တော်များတယ် …
ချိုပီး စားလို့ကောင်းတယ် …
စပ်လည်း .. စပ်တယ် …
အမေရိကားမှာလည်း ရေချို ဂဏာန်းတွေ ၀ယ်၊ ချက်၊ စားလို့ ရတယ် NNW ရေ …
ကိုယ့်တို့ တရုတ်တန်း ၁၇ လမ်းဈေးမှာ သွား .. ၀ယ် ပီး ချက်စားရသလိုမျိုးပါပဲ …
ဒီည အမေရိကားမှာ .. Mega Millions ထီ ည ပါ ..
FB နဲ့ TV တွေမှာ .. Mega ထီ ကို ၀က်ဝက်ကွဲ ပဲ ..
FB က သူငယ်ချင်းတွေ ပြောနေကြတာ …
မနက်ဖြန်ကျမှ .. ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ နှင့် အီကြာကွေး ကြော်စားတဲ့ ပိုစ့်လေး တင်ပါမည် …
မနက်ဖြန်ည .. အမေရိကားမှာ … မတ်လ ၃၁ ရက် ည ..
မြန်မာမှာ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ .. နေ့ဘက် …
ကိုယ့် FB သတင်းများကို မျှော်ပါမည် ….
NNW ရေ .. ဒါ .. ကိုယ်တို့ စတိတ် … A Dong Super Market မှာ ရောင်းတဲ့ ဂဏာန်း အရှင် …
ညှပ်နဲ့ ဆွဲပီး ပလတ်စတစ် နဲ့ ထည့်ဝယ်ရပါတယ် …
တညင်းသီး နှင့် ထန်းသီး
အုန်းနို့ ဗူး ( အပြစ် ) COCONUT CREAM
အုန်းနို့ဗူး ( အကျဲ ) COCONUT MILK
ကိုရီးယား ဘာဘီကျူး ဆော့စ်
မြေအိုး ( မြေအိုး မြီးရှည် .. ၀က်နံရိုး မြေအိုး ထမင်းပေါင်း ) ချက်စားဖို့ အတွက်
ဘုရားစင်မီး နှင့် အမွှေးတိုင်များ
ဖင်ထိုင်ခုံ နှင့် ဆပ်ပြာ၊ ခြေအိတ်လေး ချိတ်တဲ့ အ၀တ်ချိတ်တဲ့ ဂျိတ်
( ရွှေမြန်မာမှာ သုံးတဲ့ ပစည်းလေးတွေ အမေရိကားက အေရှန်ဆိုင်မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ် … အဲဒီ ကလစ်ဂျိတ် ဆိုရင် ကိုယ့် ရန်ကုန်မှာ .. ပထမ .. မွေးကာစ သားသားရဲ့ လက်အိတ်၊ ခြေအိတ်လေးတွေ ကို အ၀တ်လှန်းတယ် .. သားသားကြီးလာတော့ .. သမီး ခေါင်းစီးကြိုးတွေကို ချိတ်တယ် ) ..
March 30, 2012 Thet Nandar
4 thoughts on “ဂဏာန်း မဆလာဟင်း”
ချောင်းသာသွားရင် အဲ့ဒါပဲ စားနေတာ 😀 😀
ဂဏန်း အရမ်း ကြိုက်တာမို. လာ သွားရည် ကျသွားပါတယ် နော ..း)
Candy & MK …
အိမ်လာလည် ကျေးဇူးပါ …
ဂဏာန်း က လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်မို့ ပိုစားကောင်းတာလည်း ပါသလို .. ဂဏာန်း အကောင်လည်း ကြီးတယ် …
da nyinn tee sar chin tae.. 😦